Wednesday November 15, 2017 - 15:50:14 in Wararka by Super Admin
Warbaahinta ku hadasha Afka Xarakada Al Shabab ayaa faafisay warbixin dheeri ah oo ku saabsan weerar shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho.
War xog ogaal ah oo ay heshay idaacada islaamiga Andalus ayaa tilmaamaya in xalay fiidkii diyaarad yar oo gaar ah ay ku soo degtay Xerada Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee shisheeye ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, Islamarkaana ay halkaas ka qaaday Meydad iyo dhaawacyada cadawgii ku halaagsamay camaliyadii Istish-haadiga ee shalay ka dhacday duleedka magaalada Muqdisho.
Halyeey Istish-haadi ah oo ka tirsan guutada Istish-haadiyiinta ayaa duhurnimadii shaley camaliyad Istish-haadi ah ku beegsaday Kolonyo American iyo Afrikaan isugu jirtay oo ka soo ambabaxday saldhigga Balidoogle kuna sii jeeday magaalada Muqdisho.
Weerarka ayaa ka dhacay wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan agagaarka xaafadda weydow ee duleedka Muqdisho.
"Saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in sirdoonka mujaahidiinta uu la socday dhaq-dhaqaaqa cadowga, islamarkaana ujeedka howlgalka uu ahaa in la beegsado Saraakiil cadaan ah oo la socotay Kolonyada” ayaa lagu yiri warka ay faafisay warbaahinta Alshabaab.
Halyeeyga Istish-haadiga ayaa gaarigiisa ku dhuftay gaari gaashaaman oo ay wateen saraakiisha cadaanka ee Americanka, Waxaana la sheegay in gabi ahaanba uu halkaas ku burburay gaariga, wixii saarnaana ku halaagsameen.
Saraakiisha Mujaahidiintu waxay noo sheegeen in gaariga gaashaaman ay la socdeen ugu yaraan shan sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaarka ah Mareykanka ee dagan saldhigga qarsoodiga ah ee ay ku leeyihiin Balidoogle.
Weerarka ka dib, Kolonyo gurmad ah oo isugu jirta Afrikaan iyo Alpha Group ayaa soo gaartay halka ay ka dhacday camaliyadda kuwaas oo daabulay baqtiga, dhaawacyada iyo gaadiidka ku waxyeeloobay howlgalka, Waxaana la geeyey Xerada Xalane.
Idaacadda Islaamiga Andalus oo soo xiganeysa ilo wareedyo ku sugan xerada Xalane ayaa heshay macluumaad sheegaya in xaley fiidkii ay diyaarad yar oo gaar ah ku soo degtay Xerada Xalane, islamarkaana ay halkaas ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada gaaladii ku halaagsantay camaliyadda.
Ilo wareedyadan ayaa noo sheegay in diyaarad yar oo ay la socdaan saraakiil cadaan ah ay ku soo degtay gudaha xerada, ka dibna uu u tagay gaari Ambalaas, daqiiqado ka dibna ay goobta ka duushay.
Lama oga tirada dadka la qaaday iyo haddii ay yihiin dhaawacyo iyo baqti sida ay sheegayaan ilo wareedyada balse waxaa la sheegay in markii ay diyaaradu timid gabi ahaanba goobta laga soo saaray shaqaalaha Soomaalida iyo ciidamada Afrikaanta, islamarkaana daadgureyntu ay ku socotay si qarsoodi ah.
Weerarkii Istish-haadiga ahaa ee shaley lagu qaaday ciidamada saliibiyiinta ee ka dhacay duleedka Muqdisho ayaa la rumeysan yahay in dharbaaxo culus uu ku ahaa ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya, mana jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africa, ama taliska MISOM oo ku aadan weerarka lagu qaaday ciidankooda.